သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): သတိ... နတ်ကြီးသည်
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 00:00
ငယ်ငယ်က နတ်ကြီးသည်ရေးထားတဲ့ နတ်စင်နားမှာ နောက်မိလို့ လမ်းလယ်ခေါင် ချော်လဲဖူးတယ်။ တယောက်ယောက် နောက်က တွန်းချလိုက်သလိုပဲ။ ဒါကြောင့်များ ခုထိ ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေသလား မသိဘူး။ :))
ဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေ ညစ်ပတ်တာတော့ ကြုံဖူးပါတယ်။ ၀ဲတွေ ဒက်တွေချည်းပဲ။ ဒါနဲ့ သဂျီးလဲ ငယ်ငယ်က ဘုန်းကြီးကျောင်းသားဆို ...
Thursday, 24 February 2011 at 00:02:00 GMT
ဂွ ကြီးကြီးနဲ့ မကြပ်ရင် နတ်ပြုံးမည်။ နတ်ပြုံးလျှင် ပြန်ရယ်ပြရမည်။ ဟာဟ မှတ်သားသွားပါကြောင်း
Thursday, 24 February 2011 at 00:53:00 GMT
Thursday, 24 February 2011 at 02:27:00 GMT
ဂွ ကြီးကြီးနဲ့ မကြပ်ရင် နတ်ပြုံးမည်။ နတ်ပြုံးရင် ပြန်ရယ်ရမယ် ဆိုတာတော့ ကြိုက်သဗျာ။
Thursday, 24 February 2011 at 02:37:00 GMT
သဂျီးက အရင်က ဘုန်းကြီးကျောင်းသားဖြစ်ဘူးတယ်ဟုတ်။
ဒီလောက်တောင် ဘုန်းကြီးကျောင်းသား ကို ပုံဖေါ်ရေးပြနိုင်တာ ဗဟုသုတ ကောင်းလွန်းတာပဲပေါ့။
Thursday, 24 February 2011 at 03:45:00 GMT
နတ်ပြုံးရုံတင်မက ဖတ်တဲ့သူတွေလည်း ပြုံးသွားပါတယ် သူဂျီး
ကြံကြံဖန်ဖန် စိတ်ကူးရပြီး ရေးတတ်လို့လည်း ပြုံးရပါသေးတယ်။
သူဂျီးလည်း ဂွကြီးကြီးကိုင်ပြီး ကြပ်နိုင်ပါစေကြောင်း ................
Thursday, 24 February 2011 at 03:47:00 GMT
အခုလောက်ဆို နတ်ကြီးပင်တွေလည်း နိုင်ငံဂျားကို အလည်ရောက်သွားပြီနေမှာ သူဂျီးမင်းပြန်ရောက်ရင် ကြည့်ပေါ့ နတ်ကြီးပင်မှန်သမျှ မရှိတော့လို့ လူတွေလည်း နတ်ပြုစားလို့ ပူလိုက်တာလွန်ရောပါလား။ နတ်ကြီးပင်တွေကို သမသွားတဲ့သူတွေကတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေ ဟုတ် မဟုတ်တော့ မသိဘူးဗျို့ သဂျီးမင်းဘဲ ဆက်လက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးပါရန်.............
ပုံ- နတ်စည်းစိမ်ကို အလုခံရသူ
Thursday, 24 February 2011 at 04:52:00 GMT
Thursday, 24 February 2011 at 06:39:00 GMT
နတ်ကြီးတယ်နော် ဂွကြီးကြီးသုံးဆိုတာ တယ်မှန်တဲ့ စကားပါလား
Thursday, 24 February 2011 at 06:47:00 GMT
ဟား ဟား ဟား မိုက်တယ် လန်းတယ် :P
Thursday, 24 February 2011 at 07:24:00 GMT
အကိုရေ..စိတ်ကူးဆန်းဆန်းလေးနဲ့ရေးသားချက်ကို အားပေးသွားတယ်နော်...နတ်ကြီးတယ်နော် ဂွကြီးကြီးသုံး ရမယ်လားအကို...:P:P:P:P
Thursday, 24 February 2011 at 07:49:00 GMT
ဖတ်ပြီးပြုံးသွားပါတယ်.။ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေးတွေကိုလည်း မျက်လုံးထဲမြင်ယောင်လာတယ်.။
Thursday, 24 February 2011 at 09:20:00 GMT
ဖတ်ပီးသဘောကျသွားတယ် .. နတ်ကြီးရင် ဂွကြီးကြီး ဆောင်ထားရမယ် .. :P
Thursday, 24 February 2011 at 09:48:00 GMT
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်လေ လောကကြီးကိုက သူ့ထက်သူ လူစွမ်းကောင်းတွေချည်းပဲ မဟုတ်လား။ ဒီတော့လည်း သူ့ကိုသူ နိုင်သူ ပေါ်လာတာပေါ့လေ။
ဒါနဲ့ အဲဒီစာကို ပြင်ရေးလိုက်တာ ကိုကိုမောင် ဆိုဗျ။ တိကျသေချာတဲ့ သတင်းဌာနက သိရတာပါ။ ငယ်ငယ်က ဘုန်းကြီးကျောင်းသား ဆိုတော့လေ. . . ဟိုတလောကတောင်မှ ခေါင်းမှာ ဒက်တွေနဲ့ဆို. . . ဟဲဟဲ. . အခုရော ရေမှန်မှန် ချိုးရဲ့လား .. . :D : D : D
Thursday, 24 February 2011 at 11:48:00 GMT
Thursday, 24 February 2011 at 12:20:00 GMT
ရယ်ရတယ်.. :D :D :D
ညည်းကတော့လေ... ကျန်ကျန်ဖန် ရေးတက်တယ် :)
Thursday, 24 February 2011 at 13:34:00 GMT
အပေါ်က ကွန်မန့်နာမည်မရေးဘဲ နှိပ်လိုက်မိတယ် :P
ကြည့်ရတာ မယ်သီလရှင်ကျောင်းသူ လုပ်ရတော့မယ်
ဟားဟား သဘောကျတယ်။.. ဂွကြီးကြီးနဲ့ မကျပ်ရင် နတ်ပြုံးသလား..း)))
ဘုန်းကြီးကျောင်းသားဘ၀က ပျော်စရာကြီးနော.. (^^)
Friday, 25 February 2011 at 00:05:00 GMT
သူကြီးမင်းရေ... ရေးလည်းရေးတတ်ပါ့.. ရယ်လိုက်ရတာ.... ဟဟ.... (လင့်ခ်တွေအကုန်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ရလို့ အသစ်တင်တာမသိဘူးဖြစ်သွားတယ်.. )
Friday, 25 February 2011 at 11:26:00 GMT
လင့်ခ်တွေ ခုမှ ပြန်ထည့်လို့ ကိုကိုမောင်ရေ၊
ပုံ / သူကြီး ဆိုတာထက် ဆိုးနေတယ် ဟဟဟဟ :)
Friday, 25 February 2011 at 14:17:00 GMT
ခစ်ခစ်… ရယ်သွားတယ်။ နတ်တို့ ဘာတို့ဆို စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသားနော်။ ကိုယ် မမြင် မတွေ့နိုင်တဲ့ အရာတွေ လူတွေ ယုံကြည်ကြတာလည်း ဒုနဲ့ဒေး ဆိုတော့။
Friday, 25 February 2011 at 14:57:00 GMT
ခေါင်းစဉ်မြင်တော့ အဲ့ဒီလို တွေးမိသေးတယ်။
တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေလည်း ရှိလို့ လူတွေလည်း သေသေချာချာ မကြုံဖူးရင်တောင် ကြောက်ကြတာပါပဲ။ အပင်ကြီးရင် အလိုလိုကို ရှိန်နေတတ်ကြတာ။
Friday, 25 February 2011 at 20:08:00 GMT
လူသူလေးပါး အားထားကြ ငါ့တို့နတ်ကြီးကွ။
Sunday, 27 February 2011 at 11:45:00 GMT
Thursday,3March 2011 at 04:29:00 GMT